Igama elithi "ikomidi" linenkcazo ezininzi. Kwimimandla yechemistry, "i-compound" ibhekisela kwi "chemical compound".
I-compound yintlobo yeekhemikhali eyenziwa xa ii- atom ezimbini okanye ngaphezulu zidibana kunye nemichiza, kunye nezibophelelo ze-i-covalent okanye ionic .
Iimveliso zingahle zihlulwe ngokwezihlobo zeebhondi ezibophe iibhanki kunye:
Iimolyuli zigcinwe kunye kunye nezibophelelwano ezidibeneyo.
Iimiconi ze-ioni zibanjwe kunye nezibophelelo ze-ionic.
Iimitha ezidibeneyo zibanjwe kunye nezibophelelo zetsimbi.
Iingxaki zihlala ziqhutywe ndawonye ngokuqhagamshelana nezibophelelo ezihlanganisiweyo.
Qaphela ukuba elinye iqela liqulethe umxube weekhonkco ze-ionic kunye ne-covalent. Kwakhona phawula, ezimbalwa izazinzulu aziboni ukuba izinyithi ezizodwa zenziwe zihlanganiswe (izibophelelo zetsimbi).
Imizekelo yamacandelo iquka ityuwa yetyuwa okanye i-sodium chloride (i-NaCl, i-ionic compound), i-sucrose (i-molecule), i-nitrogen gesi (i- 2 , i-molecule eyi-covalent), isampuli yentsimbi (intermetallic) kunye namanzi (H 2 O, i molekyuli ephihliweyo). Imizekelo yeentlobo zeekhemikhali ezingabonwa njengeemveliso ziquka i-hydrogen ion H + kunye nezinto ezinobungakanani begesi (umzekelo, argon, neon, helium), ezingenakulungele ukwenza izibophelelo zeekhemikhali.
Ukubhala iifomula zeComputer
Ngendibano, xa i-atom yenza ifom, ifomula yayo ibhala i-atom (s) esebenza njenge-cation yokuqala, ilandelwa i-athomu (s) esebenza njenge-anion.
Oku kuthetha ngamanye amaxesha i-athomu ingaba yowokuqala okanye iphelileyo kwifom. Ngokomzekelo, kwi-carbon dioxide (CO 2 ), i-carbon (C) yenza njenge-cation. Kwi-silicon carbide (i-SiC), i-carbon i-anion.
ICompound Versus Molecule
Maxa wambi i-compound ibizwa ngokuba yi- molecule . Ngokuqhelekileyo, le mibini mibini iyafana. Ezinye izazinzulu zenza ulwahlulo phakathi kweentlobo zeekhonkco kwiimeleleksi (i- covalent ) kunye ne-compounds ( ionic ).
Inkcazo kaRaoult yoMthetho
Inombolo ye-Avogadro Inkcazo
I-Kilopascal (kPa) Inkcazo
Yiyiphi i-Standard Standard kwiKhemistry?
Biography kaJohn Riley
Iingoma zesiFrentshi ze "Adeste Fideles"
Ukugcinwa kweDatha yokuThunyelwa kwabasebenzisi kunye neefayile kwi-MySQL
"Abaculi abalungileyo Bokhokhela, AbaChwebi Bakhulu Baba"
I-Ford Super Chief Concept Truck
U-Aristophanes Uxela Indlela Esiye Saba Nayo Ukuba neengxaki zobomi bobulili bobulili bobulili bobulili bobulili obufanayo
Ukufunda eNew Orleans kunye neNkantwa Katrina
Yiyiphi Isantya sesantya se-Downhill Skier?
Indlela Ukukhubazeka Kwenene Okucacileyo
Kutheni iAlk Teeth Black?
Ubomi nokufa kwe-Brock Little
Umxholo weNcwadi yeBhayibhile yePentekoste yeSizwe
IsiGrazil IsiGama: Imibuzo ebuzwa rhoqo